Liverpool Oo Ka Fiirsaneysa Inay U Dhaqaaqdo Xiddiga Juventus Paulo Dybala
HomeHoryaalka IngiriiskaLiverpool oo ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo xiddiga Juventus Paulo Dybala
March 14, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso saxiixa xiddiga Juventus Paulo Dybala . Reds ayaa soo martay xilli ciyaareed liita intii uu ka hoos ciyaarayay Jurgen Klopp waxayna qorshaynayaan xagaaga iyaga oo doonaya in ay isku sameeyaan dib u dhis balaaran.
Sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday El Gol Digital , Liverpool ayaa wax ka waydiisay helitaanka Paulo Dybala.
Weeraryahanka reer Argentine qandaraaska uu haatan kula joogo Juventus ayaa dhacaya xagaaga 2022, taas oo ku qasbi karta Juventus inay iska iibiso xagaagan, ama ay halis ugu jirto inuu beeca xorta ah ku waayaan sannadka dambe.
Paulo Dybala ayaa awoodi waayay inuu boos joogto ah ka helo safka koowaad ee Andrea Pirlo xilli ciyaareedkan. In kasta oo loo doortay ciyaaryahanka ugu qiimaha badan xilli ciyaareedka 2019-20 ee Serie A, Dybala wuxuu ku guuldareystay inuu helo kalsoonida macallinkiisa cusub.
Dybala ayaa kaliya 11 kulan u saftay Serie A xilli ciyaareedkan kooxda Juventus. Warbixinta ayaa soo jeedineysa in 27 jirkaan uu jahwareersan yahay waqti yar oo uu ciyaaro, islamarkaana uu u furan yahay inuu ka dhaqaaqo Turin.
Dybala ayaa inta badan lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Premier League sanadihii ugu dambeeyay. Ciyaaryahankii hore ee Parma ayaa ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda Tottenham Hotspur xagaagii lasoo dhaafay, sidoo kale Manchester United ayaa horay u dooneysay.
Liverpool ayaa la sheegayaa inay xiiseyneyso saxiixa Dybala madaama ay ku dhibtoonayeen inay la mid noqdaan qaab ciyaareedkii ka caawiyay inay qaadaan Premier League xilli ciyaareedkii hore.
Isku darka dhaawacyo iyo qaab ciyaareed liita oo ay soo bandhigeen ciyaartoy dhowr ah ayaa keentay in kooxda Jurgen Klopp ay hoos ugu dhacdo kaalinta 8aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
In kasta oo ay soo food saartay dhibaato dhaawac oo baaxad leh oo dhanka daafaca ah, hal-abuur la’aan iyo goolal la’aan ayaa ah muuqaalka ugu xiisaha badan ee ciyaartii Liverpool bilihii u dambeeyay.
Jurgen Klopp ayaa sidaas darteed isha ku haya inuu lasoo saxiixdo weeraryahan tayo sare leh xagaagan si uu ugu xoojiyo xulkiisa weerarka.